मनाङको विकास निर्माणमा मौसम बाधक
प्रदेश सभा सदस्य चढेको गाडी दुर्घटना
१९ पुष २०७८, सोमबार १५:१७ प्रकाशित
मनाङ- अधिकांश स्थानमा गर्मी मौसममा विकास निर्माणका काम गरिन्छ । कुनै स्थानमा गर्मी लाग्ने अवस्थामा केही विकासका काम गरिन्छन् । हिमाली जिल्ला मनाङमा न गर्मीमा न हिउँदमा विकास निर्माणका काममा कठिनाइ हुने गरेको छ । जाडो मौसममा यहाँको विकास निर्माण पूर्ण रुपमा प्रभावित हुँदैआएको छ ।
यसपटक गर्मीमा मौसम परिवर्तनका कारण बाढीपहिराले समस्या निम्त्याइरह्यो । हिउँद लाग्नासाथ मौसम बद्लिएर हिमपात सुरु भयो । हिमपातसँगै निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ ।
प्रकृति नै बाधक बन्दा यहाँको विकासमा बाधा पुगेको छ । बाढीपहिरो खस्न छाडेपछि केही विकासका काम थालिए पनि त्यसले निरन्तरता पाउन नसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रवीन्द्रप्रसाद आचार्यले बताए ।
यहाँको विकास गर्न प्रकृति नै बाधक बनेको छ । दुवै मौसममा निर्माण कार्य गर्न सकिँदैन । केही समय काम गर्न सुरुआत मात्रै गर्ने र पूरा गर्न नपाउँदै अर्को मौसम सुरु हुन्छ जसले निर्माणको काम गर्नसक्ने अवस्था हुँदैन,ु उनले भने । मनाङको प्रवेशद्वार नासों गाउँपालिकाको धारापानीसम्म मात्रै सवारी आवतजावत हुने गरेको आचार्य बताउँछन् ।
हिउँदमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । गर्मीमा बाढीपहिरोले सामग्री ढुवानी हुन नसक्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको र हिउँदमा हिमपातले सवारीसाधन आवतजावत हुन नसक्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको प्रजिअ आचार्यले बताए । उनी भन्छन्, हिउँद सुरु भएसँगै हिमपातले सवारीसाधन आवतजावत रोकियो । विकास निर्माणका काम रोकिए । विकास निर्माणमा आवश्यक सामग्री ल्याउन नसकिने र ल्याएर राखिएका सामग्री हिमपातले जमेर काम नलाग्ने भएका छन् । विकास निर्माणले कहिले गति लिने यस्तो अवस्थामा
गर्मीमा बाढीले भत्किएको पुल मर्मत गर्न थालिए पनि अझै पूरा भएको छैन । पुल निर्माणार्थ आवश्यक पर्ने सामग्री ढुवानी गर्न नसक्दा अहिलेसम्म पुल मर्मतको काम अलपत्र छ । बाढीले भत्किएका सामुदायिक एवं व्यक्तिगत आवास निर्माण गर्न सकिएको छैन । हिमपातले सामग्री मनाङसम्म ल्याउन मुस्किल पर्ने हुँदा अलपत्र परेको प्रजिअ आचार्य बताउँछन् ।
माथिल्लो मनाङ, नार्पाभूमि गाउँपालिकाको नार, फु गाउँलगायत सदरमुकाम चामेसम्म सवारीसाधन आउन चल्न सकेको छैन । हिउँदमा हिमपातले गर्दा करिब तीन महिनासम्म सवारी आवतजावत हुँदैन । हिमपातले पुरिएको स्थानमा हिउँ फालेर मात्रै बाटो पहिल्याउन सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा विकास निर्माणको काम गर्नसक्ने अवस्था छैन, उनले भने । विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष मनाङमा बाढीपहिरोले भौतिक संरचनामा क्षति धेरै पुर्‍याएको छ । बाढीपहिराले क्षति पुर्‍याएका भौतिक संरचना निर्माणको काम अलपत्र नै छन् । दुवै मौसममा निर्माणको काम गर्न नसक्दा अहिलेसम्म मनाङका धेरै भागसम्म सडकको व्यवस्थापन राम्रो बनाउन सकिएको छैन ।
१. प्रदेश सभा सदस्य चढेको गाडी दुर्घटना
२. नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख पुग्यो
३. राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मतदान बिहान ९ बजेदेखि
४. आज पनि देशभर बदली, केही स्थानमा हिमपात र वर्षा
५. आज १२ हजार ८ जनामा कोभिड-१९ को संक्रमण पुष्टि